Izwi - Nge-hit NBC Yezokuncintisana
Yintoni 'iLizwi' ?:
Izwi likhuphiswano lokwenene lokucula kwiNBC. Ngokusekelwe kwisiboniso se talente saseDutch, i -Voice of Holland , i-US version ekuqaleni yaqala ngo-Aprili 26, 2011, kwaye ngokukhawuleza yaba yintlanzi.
Imiba emininzi icwangcisiweyo Izwi ngaphandle kwezinye izikhuphiswano zokucula, njenge- American Idol :
Uphicotho-zincwadi ziyimfama . Abagwebi beLizwi ababonanga iimpikiswano ngexesha leengxoxo, ngoko ke abachaphazelwa ngumtsalane omncintisana, ubungakanani bomzimba okanye isitayela.
Abagwebi beemvumi. Abagwebi beLizwi abavelisi okanye ezinye iziphathamandla zomculo (njengokuba zibonisa imizekelo eninzi). Esikhundleni saloo nto, ngaba ngabaculi abadumileyo abarekhodayo abamele uluhlu lwezixhobo zomculo.
Abagwebi bavota. Nangona abavoti ababukeli benokugqibela, abagwebi beLizwi bavota kwakhona.
Abagwebi nabo baqeqeshi. Kulungile, i- X Factor nayo inebagwebi "abacebisi" babo amaqela eemvumi, kodwa, ngenxa yenkqubo yokuvota kwiLizwi , ngamnye wabagwebi uthumela omnye wabadlali bezabelo kwixesha lokugqibela.
Akukho ziphumo ezibonisa. Kuze kube semiboniso, akukho mboniso yecandelo elihlukileyo.
'Ilizwi' lisebenza njani ?:
Izwi linamacandelo amathathu omncintiswano:
Uphicotho olububungqina : Ngexesha lokuphicothwa kweezwi, izitulo ezijikelezayo zivimbela abagwebi ukuba bangababoni abadlali, ngoko ke izigqibo zabo zisekelwe kuphela kwizwi lomculi kwaye kungekhona ukujonga kwabo. Ukuba omnye wabagwebi uthanda ilizwi eliphikisanayo, uqhube iqhosha lokuzikhetha. Oku kubangela ukuba usihlalo we-coach aqhubeke ukuze umqhubi angabona ngubani owamkhethayo. Ukuba elinye ijaji elilodwa likhetha umculi, umqhubi ukhetha ukuba yiyiphi ijaji abafuna ukusebenzisana nayo. Ijaji ngalinye lidala iqela kunye nabaqeqeshi babo abavumiweyo.
Iimfazwe eziMfazwe : Ngexesha lokulwa kunye nabadlali abaqeqeshwe ngabagwebi kwaye baqeqeshwa ngabathengi abongezelelweyo abongezelelweyo, abaziwa ngokuba "ngabacebisi." Iimfazwe zemfazwe ezimbini zomculo weejaji. Bafanele bacule ingoma efanayo kunye phambi kwabaphulaphuli be-studio. Emva koko abagwebi bakhetha ukuba yeyiphi imvumi yabo eya ekhaya.
Ukuba : Ngexesha lesithathu, i -Voice yazisa "ukweba." Ngexesha lokulwa, umqeqeshi ngamnye unamabini "aphanga," okuvumela elinye ijaji ukuba likhethe elinye ijaji eliqeshwe ngabathengi. (Ukuba ngaphezulu komqeqeshi omnye ufuna umculi ofanayo, ufumana isigqibo sokugqibela.)
Ukuqhoqhozela ngeenxa zonke : Kwakhona kwongezwa kwiNyanga yesiThathu, "ukuzongqongqoza," yinqanaba elitsha lokhuphiswano apho amaqela athatyathwa khona. I-Round Knockout Round yaqedwa kwiNyanga yesithandathu xa ababukeli bebekhona ithuba lokubona i-Second Rounds Rounds.
Playoffs Live : Amalungu asele kwinqanaba lejaji ngalinye aqhubeka ukuya kwinqanaba libonisa apho amalungu eqela elincintisana khona ngokuqhuba i-panel yejaji kunye namavoti ababukeli. Iimvumi ezine zokugqibela ziyaqhubeka ukuya ekupheleni.
Iimvo zokujonga : Ababukeli bafumana ithuba lokugcina umdlali omnye kwiqela ngalinye, ngelixa insimi esele iyancitshiswa ngabagwebi. Ababukeli beTV bafumana ithuba lokuqala lokuvota ngexesha loPhulo lwePlaff, kodwa ixesha xa abalandeli befumana ilungelo elo liye latshintsha ngokuhamba kwexesha. Kwixesha lesithathu, ababukeli baqala ukuvota ngexesha le-Top 24, Ngexesha leNyanga liye lahla kwi-Top 16, iZihlanu zeNyanga zenyuka ukuya kwi-Top 20 kwaye emva kwexesha lesithandathu, liye labuyela kwi-Top 12.
I-Final : Ijaji ngalinye lishiywe ngumdlali omnye wokugqibela kwaye ezi zine zenza ngexesha lokugqibela. Ukuvota umbukeli unquma ukuba yeyiphi enye yokugqibela eya kuthiwa nguyena oyinqobile.
Yintoni uMninimzi 'weLizwi'?
Iimvumi zeLizwi zincintisana nethuba lokuphumelela i-$ 100,000 kunye neengxelo zokurekhoda neRiphabhlikhi ye-Universal.
Ngubani 'iLizwi' Abagwebi / abaqeqeshi ?:
Abagwebi - abasebenza njengabaqeqeshi nabacebisi - zonke izinto eziphezulu kwiimpawu zabo zomculo. UChristina Aguilera noCee Lo Green bakhonza njengabagwebi kwixesha eli-1 lokuqala, emva koko batshintshe kunye no-Shakira no-Usher.
: Njengomculi / umbhali womculo we- Maroon 5 , u- Adam Levine unyuliwe iminyaka esixhenxe (kwaye wanqoba ezintathu) i-Grammys, ngenxa yeengoma ezinjenge-duo ka-2011 kunye noKristuina Aguilera, "Uhamba NjengaJagger."
UBlake Shelton : Umculi welizwe uBlake Shelton uzuze i- CMA ye-Male Vocalist yoNyaka, eneeCD ezintathu kwi-10 ephezulu, yathetha ityelelo lokuthengiswa kwaye yafakwa kwi-Grand Ole Opry. U-Shelton uphinde wakhethwa kwi-Grammys ezimbini: I-Best Solo Performance Performance ne-Country Country Best.
: Eyaziwa kakhulu kwiingoma "Crazy" kunye "Ukulibala," owayengumlingani weqela likaGnarls Barkley , uCee Lo Green wayengumgwebi kwiNkanye Yowodwa kwiThathu.
UChristina Aguilera : Umculi, umculi, kunye nomnye owayengumfana wesantya u-Christina Aquilera wayengumgwebi kwiinyanga zokuqala ezintathu zeLizwi .
U-Shakira : Umculi waseColombia othengisa kakhulu, u- Shakira unama-albhamu engaphezu kwezigidi ezingama-70 athengiswa emhlabeni wonke.
Usher : Omnye weemvumi eziphumelele kakhulu kuma-2000s, i-R & B inkwenkwezi u-Usher wabuye wamisela umsebenzi kaJustin Beiber .
Ngubani Ophethe 'Ilizwi' ?:
UCaronon Daly ungumphathi weLizwi . U-Daly, owayesakuba ngu-MTV VJ naye ungumndilili we-NBC yobusuku bobusuku beentetho ze- Last Call kunye noViconon Daly .
Ngubani 'iLizwi' Abacebisi ?:
Ngethuba lokulwa kunye neLizwi , abacebisi bacebisa abaphili beengoma. Aba ba cebisi bahluke ngonyaka kodwa bahlala beyaziwayo. Ngokomzekelo, kwixesha lesibini, abacebisi baquka umlenze womculo uLionel Richie, u- Kelly Clarkson no-Alanis Morissette.
Ngubani ovelisa 'ilizwi' ?:
Evezwa yiTalpa Productions kunye neWarner Horizon Television, Izwi ladalwa nguJohn de Mol, olawulayo uvelisa i-US inguqulo kunye noMark Burnett no-Audrey Morrissey.
Xa 'Ilizwi' Lomoya ?:
Izwi lihamba nge-NBC, ngobusuku boMsombuluko 8 / 7PM ePhakathi.
Abazali bakhokela kwiNzuzo kunye noThengwa lwezindlu zasekhaya
IBhayibhile Eyaziwayo Kubantwana
Ukuthenga i-Sailboat - Inboard vs Outboard Engines
I-Green Flash Phenomenon kunye nendlela yokuyijonga